Shaqaale ama ganacsade - InfoFinland
Magangalyo ka helidda Finland
U soo guurista Finland > Tusmo fudud u soo guurayaasha Finland > Shaqaale ama ganacsade
Ogolaanshiyaha joogitaanka sii-socda
Shaqo ku sameynta iyo shirkadleynta ama ganacsiga Finland
Haddii aad tahay muwaadin u dhashay dal Waqooyiga Yurub ah, Midowga Yurub, ETA ama Switzerland islamarkaasna aad shaqo u timid Finland, uma baahnid ogolaanshaha joogitaanka. Iyadoo ku xiran jinsiyadaada waxaad faahfaahin dheeraad ah ka sii aqrisaa bogagga InfoFinlandi Muwaadiniinta u dhashay wuqooyiga Yurub ama Muwaadiniinta Midowga Yurub.
Haddii aad tahay muwaadin wadan kale, waxaad u baahan tahay ogolaanshiyaha joogitaanka ee sababo shaqo. Haddii aad horay ugu joogtay Finland sababo kale, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay inaad shaqeyso inkastoo aadan ku codsan ogolaanshiyaha joogitaanka shaqo darteed. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Shaqo u imaanshaha Finland.
Haddii aadan aheyn muwaadin u dhashay wadan xubin ka ah Midowga Yurub, wadmada ETA ama Switzerland aadna dooneyso in aad ganacsade ahaan uga shaqeyso Finland waxaad u baahantahay sharciga degenaanshaha ganacsadaha. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ogolaanshiyaha joogitaanka ee ganacsadaha waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi U imaanshiyaha Finland sidii ganacsade.
Sharciga degganaanshaha ah ee sii soconaya ka dalbo adeegga internetka ee Enter Finland ama barta aadeegga ee Xaafiiska dal u soo guuridda. Dalabka samee inta uunsan kaa dhicin sharcigaagii degganaanshaha ee hore. Macluumaad dheeraad ah ku saabsan sharciga degganaanshaha ah ee la sii wadayo waxad ka heli kartaa bogga InfoFinlandi Ogolaanshaha sii-socda.
Shaqo ku sameynta iyo ku ganacsiga Finland
Qeybta Shaqo iyo ganacsashada ee InfoFinland waxaad ka heleysaa macluumaad badan oo ku saabsan nolosha shaqo iyo ka ganacsiga ee Finland.
Luqada Finnishka iyo Iswdishika
Shaqo-bixiyayaasha qaarkood waxay shaqaalahooda u qabanqaabiyaan barashada luqada Finnishka. Weydii shaqo-bixiyahaada inay goobtaada shaqada ku qaban-qaabinayaan barashada luqada Finnishka. Macluumaadka fursadaha kale ee lagu baran karo luqada Finnishka ama Iswidishka waxaad ka heleysaa qeybta Luqada Finnishka iyo Iswidishka ee InfoFinlandi.
Haddii aad dooneyso inaad naftaada u barato tacliin ama aad dooneyso inaad kororsato aqoontaada xirfadeed, waxaad ka qeyb-qaadan kartaa waxbarashada dhameystirka ah. Waxbarashada dhameystirka ah waxaa qaban-qaabiya goobaha ay ka midka yihiin qeybaha waxbarashada, ururada xirfadda iyo Qeybta horumarinta xirfadda. Sidoo kale goobo shaqo oo badan ayaa tababara shaqaalahooda, tusaale ahaan isticmaalka qalabyada cusub iyo barnaamijyada.
Waxbarashadu ma ahan oo kali ah barashada xirfad. Waxbarashadu waxay adiga kuu noqon kartaa hiwaayad. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogagga InfoFinlandi Waxbarashada oo hiwaayad oo kale ah.
Macluumaadka aasaasiga ah waxbarashada dhaneystirka ahFinnish | Iswidish
Ammaanka bulshada Finnishka waxaad ku geli kartaa sabab deegaan oo rasmi ah ama shaqo. Inta badan manfacyada Keladu waa kuwa aad xaq u yeelan karto uun haddii aad si joogto ah ugu soo guurto Finland. Intaas waxaa u dheer, waa inaad buuxisaa shuruudaha laga doonayo dadka degan Finland marka ay doonayaan inay helaan manfacyadaas.
Haddii aad Finland ugu soo guurto shaqo, waxaad inta badan mudada uu shaqeynayo xiriirkaada shaqada xaq u yeelaneysaa manfacyada Kelada, xittaa haddii uu heshiiskaada shaqadu yahay mid gaaban.
Haddii uu mushaarkaadu yahay ugu yaraan 696,60 € bishi, waxaad xaq u yeelaneysaa manfacyo badan oo ay Keladu bixiso. Wax saameyn ah kuma lahan arrintan inta saacadood oo aad shaqeyso todobaadki ama inta uu gaarayo xiriirkaada shaqadu.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ammaanka bulshada Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi: Ammaanka bulshada Finland.
Haddii ad ka shaqayso Finland, waxa ay faa’ido kuugu jirtaa inaad gasho ururadda xubinta laga noqdo marka la shaqaynayo ee qofka taakuleeya hadday shaqo la’aan ku dhacdo. Haddii ad xubin ka tahay ururadaas waxad heli kartaa taakulayn maalinleh ah oo laguugu xisaabinao mishaarkaagu inta uu ahaa, hadday shaqo la’aan kugu dhacdo. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Ururada shaqaalaha iyo Gargaarka shaqo la’aanta.
Daryeelka caafimaadka shaqaalaha iyo ganacsadaha
Haddii aad Filand shaqo u timid, sida badan waxaad xaq u leedahay inaad isticmaasho adeegyada caafimaadka ee dawladu bixiso. Tani waxay ku xiran tahay dhirirka inta heshiiska shaqadaadu uu socday iyo nooca heshiiska shaqada iyo weliba wadanka aad Finland uga timid. Waxaad codsan kartaa in Keladu ay soo caddeyso xaqaada adeegyada caafimaadka dadweynaha. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan daryeelka caafimaadka waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Adeega caafimaadka ee Finland.
Finland, Shaqo-bixiyaha waxaa waajib ku ah in uu shaqaalihiisa ka bixiyo qarashka ku baxaya daryeelka caafimaadka kahortaga ah.
Ganacsadaha waxay naftooda u abaabuli karaan daryeelka caafimaadka shaqaalaha, haddii uu rabo. Qofka ganacsadaha ah qasab kuma ahan inuu naftiisa u abaabulo deryeelka caafimaadka ee shaqaalaha. Si kastaba ha ahaado ganacsaduhu waa inuu daryeelka caafimaadka shaqaalaha u abaabulo shaqaalihiisa, asaga u shaqeeya.
Daryeelka caafimaadka shaqada waxaa qabanqaabin kara rugta caafimaadka ee deegaanka ama tusaale ahaan xarunta dhaqaatiirta ee gaarka ah.
Wixii macluumaad dheeri ah waxaad ka heli kartaa InfoFinlandi bogga Daryeelka Caafimaadka Shaqaalaha iyo bogga internetka ee wasaarada arimaha bulshada iyo caafimaadka.
Daryeelka caafimaadka shaqaalahaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii aad weyso shaqadaada
Haddii aad heysato ogolaanshiyaha joogitaanka ee shaqaalaha ee quseysa uun hal shaqo oo aad u qabaneyso shaqo-bixiye cayiman islamarkaasna aad shaqadaadi weyso, waa inaad guud ahaan codsataa ogolaanshiyaha joogitaanka shaqaalaha oo cusub ama ogolaanshiyaha joogitaanka dalka sababo kale adigoo cuskanaya.
Haddii Xafiiska dal u soo guuristu uu ku siiyay adiga ogolaanshiyaha joogitaanka shaqaalaha islamarkaasna uu dhamaado xiriirkaadi shaqo ka hor ogolaanshiyaha joogitaanka, adiga ama shaqo-bixiyayahaadu waa inay Xafiiska dal u soo guurista qoraal ku ogeysiiyaan in xiriirkaadi shaqo uu dhamaaday.
Haddii ogolaanshiyahaada joogitaanka ee shaqada aysan ku xadeysneyn hal shaqo oo shaqo-bixiye cayiman aad u sameyneyso, ee lagu bixiyay xirfad cayiman ogolaanshiyahaadina uu shaqeynayo, waxaad bedelan kartaa booska shaqo adigoo ku bedelanaya isla xirfaddii.
Haddii aad dhibaato kula kulanto goobta shaqada, la xiriir marka hore madaxdaa. Haddii aadan caawimaad ka helin, la xiriir wakiilka badbaadada shaqada ama qofka loo wakiishay arrimahaas. Haddii arrintu ku xallismi weyso goobta shaqada, la xiriir xafiiska badbaadada shaqaalaha ee deegaankaada ama iskaashatada xirfadleydaada.
Macluumaadyada iyo hagitaanada ku saabsan meesha aad caawimaad uga heli karto dhibaatooyinka kala duwan ee nolosha shaqada waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dhibaatooyinka nolosha shaqada.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 04.03.2019 Boggan war-celin ka soo dir